Ubuntu Webhu: Chii ichi chinonzi kukwikwidza Chrome OS? | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu Web: asi chii ichi chinoti chinokwikwidza Chrome OS inomhanya paFirefox?
Kunyangwe ini pachangu ndaisazotaura nezvazvo Chrome Os Seimwe yeakanakisa sarudzo kana zvasvika kune desktop desktop, inofarira vazhinji vashandisi. Zano reGoogle remakomputa rakavakirwa pawebhusaiti, Chrome, uye zvese zvinoitika pairi, saka hazvidi kuti komputa ine simba imhanye. Zvinoda kushandisa Chromebook, asi vhiki ino takaudzwa nezveimwe nzira ingangokwanisa kumhanya pane chero komputa. Zita rako, Ubuntu Webhu.
Asi kwete, ichi hachisi chinyorwa icho chatiri kuzokupa iwe zvese nezve kugovaniswa kweLinux nyowani. Chaizvoizvo, isu tiri kungo zivisa nezve kubata kwayo, kuitira kuti chero munhu anoda kutevedzera chirongwa ichi pasocial network kana kuziva zvatiri kutaura nezvazvo mune zvine chekuita nezvinyorwa zvinotevera. Uye ndezvekuti ivo vanogadzira Ubuntu Kubatana uye Ubuntu Dzidzo (UbuntEd) vari kugadzirira chimwe chinhu chinobatana Ubuntu uye Firefox pane system iyo zvakare inomhanya mubrowser.
Ubuntu + Firefox = Ubuntu Webhu
Ubuntu Web chirongwa icho ini chandakaona kuti chifanane seChannel OS, ini ndinayo se base base, kana Firefox browser.#linux #ubuntu #Webhu pic.twitter.com/mB9jXsh2oN
- Allan Carvalho (@alera_on) July 22, 2020
Mauya @ubunweb! Ubuntu Web chirongwa chakauya kuzokwikwidza neChannel OS, zvichibva paFirefox browser.
Kana zviri zveruzivo, vashoma kana hapana. Nhoroondo yepamutemo yeTwitter yeprojekti, ine chinongedzo Allan Carbalho inotipa muTwitter yake, yakavhurwa isingasviki maawa makumi maviri nemana apfuura uye yakangotumira posvo imwe kuti iti ichasvika nekukurumidza uye kuti tigare takatarisana. Mune iyi nhoroondo ivo vanojekesa akati wandei zvinhu: kuti ichave yakavakirwa paUbuntu neFirefox uye kuti ichave ine simba webhu inoshanda system uye open source. Tichifunga nezvekuti pakati pezvirongwa zvayo ndezvekuti Ubuntu Kubatana uye Ubuntu Dzidzo kuve zvinwiwa zviri pamutemo, hatigone kudzora mukana wekuti mune ramangwana Ubuntu Webhu zvakare ichave chikamu chemhuri yeCanonical, asi zvaizoita sekutapira here?
Chero zvazvingaitika, zvakanakisa zvatingaite ndizvo zvavakatiudza mune yavo chete tweet: ramba wakatarisana. Tichava uye, kana paine nhau, isu tichazivisa nekukurumidza sezvazvinogona. Asi unofanirwa-kubvunza mubvunzo: ungave unofarira kuyedza izvi Chrome OS anokwikwidza Pc yako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu Web: asi chii ichi chinoti chinokwikwidza Chrome OS inomhanya paFirefox?
Mario borges akadaro
Ehe, ini ndoda kuedza iyi nyowani sarudzo.
Pindura kuna Mario Borges
Zvese zvinoenderana ne linux m intrresa
Luisi Archi Valdi akadaro
Ndanga ndichifunga uye ndichifungidzira nezve mukana webrowser-based operating system ichiitwa kwechinguva. Ini ndinofunga ingave iri nzira kwayo yekuvaka yakapusa uye yakareruka mashandiro ehurongwa kupfuura akaomarara echinyakare mashandiro masisitimu.
Uye Ubuntu Web inoita chaizvo zvandataura pamusoro. Ndinovimba ichave iri tsika yekushandisa masystem mune ramangwana munguva pfupi nepakati.
Pindura Luisi Archi Valdi
BadPower: kurwisa kwemaadapter ekuchaja nekukurumidza anogona kukonzera moto
Chrome OS 84 inosanganisira zvitsva zvemapiritsi nevashandisi veLinux, pakati pevamwe